Ukuhamba Kwe-Asflat Kuyaqhubeka e-Ankara | RayHaber | raillynews
IkhayaTURKEYIsifunda sase-Central AnatoliaI-06 AnkaraUkuhamba Kwe-Asflat Kuyaqhubeka e-Ankara
23 / 05 / 2020 I-06 Ankara, Isifunda sase-Central Anatolia, Izindaba ze-Asphalt, JIKELELE, Highway, TURKEY
ukugqugquzela i-asphalt kuyaqhubeka e-Ankara
Umasipala we-Ankara Metropolitan uyaqhubeka nomsebenzi we-asphalt ongu-7/24 ngesikhathi esimenyezelwe njengengxenye yokulwa nokuqubuka kwesimo se-coronavirus. Umnyango Wezindaba Zesayensi, nowawuthwala amathani angama-16 we-asphalt ethela phakathi kukaMeyi 19-23, wahlanganisa ingqikithi yamathani asobala angama-302 emigwaqweni eyikhulu kuphela ngezinsuku lapho sekufakwe isikhathi sokuvalwa. La maqembu ekugcineni aqede inqubo yokwakha i-asphalt phambi kwe-AŞTİ.
Ngokuvulwa kwesizini yokugcwala komoya, uMasipala wase-Ankara Metropolitan usheshise umsebenzi wokwakha nokulungisa kabusha i-asphalt ezingxenyeni eziningi ze-Capital.
Ngaphakathi esikalini sokulwa nobhubhane lwe-coronavirus, amathimba oMnyango Wezesayensi andise lo msebenzi kusihlwa omenyezelwe ngempelasonto; Wenza umsebenzi we-asphalt ngamaphuzu amaningi edolobha ukusuka e-Altındağ kuya e-Çankaya, ukusuka e-Etimesgut kuya eYenimahalle.
77 IZINSUKU ZE-18 ZIYASUKA EMITHELWENI NGESITOLO ESISUKA E-APRIL NAMUHLA
Ngezinsuku lapho isikhathi sokumenyezelwa simenyezelwe khona, imisebenzi yoMnyango Wezindaba Zesayensi, eqhubeka nokusebenza ezindaweni ezingaphezu kwesisodwa ngenxa yemigwaqo engenalutho, yagcwalisa amathani ayi-16 wendlela yokugcwala asphalt emakhelini ayi-19 namathani ayi-6 16 wokuphamba ngemfucumfucu emakheli angama-33.
Amaqembu angama-7/24; Ngenkathi siletha amathani ayizigidi ezingama-4 asphalt emigwaqweni eyinhlokodolobha ngamaphuzu angama-69 ngezinsuku ezi-23, yenze ingqikithi yamathani ayizinkulungwane ezingama-392 emigwaqo asphalt kusukela ngo-Ephreli, lapho sekuwukuphela kwendlela esetshenziswe ngayo isikhathi.
SOLUTION SESISEKELWE U-AŞTİ
Ngemuva kwenqubo yokwakha nokubopha i-asphalt, izifunda ezingama-20 zisuka e-Akyurt zaya eYenimahalle, e-Bala zaya eMamak, e-Etimesgut zaya e-Elmadağ zathola ukubukeka okusha ngemigwaqo evuselelwe.
UMasipala Metropolitan, ohlanganise i-AŞTİ, lapho ambalwa kakhulu amabhasi okuhlangana, njengengxenye yezindlela zobhubhane lwe-coronavirus, usephothule nomsebenzi wokuvuselela i-asphalt ongazange wenziwe isikhathi eside ngenxa yokufika nokusuka kwamakhulu amabhasi nsuku zonke. Imigwaqo ephambi kwe-AŞTİ yavuselelwa ngamathani ayinkulungwane ayisithupha asphalt.
UMasipala Metropolitan ubuye washeshisa nomsebenzi wokwakha isiphondo ezindaweni zezimboni eziseBaşkent. Amathimba oMnyango Wezesayensi abeke amathani ayizinkulungwane ezingama-7 e-asphalt ku-Abdülhalik Renda Street esifundeni i-OSTİM kanye namathani ayizinkulungwane ezingama-870 asphalt ku-Abadlokadir Geylani Street.
Imisebenzi ye-Asflat yaqala eKarabük
Ukuthutha nokuthutha kwe-asphalt kuqhubeka ngokuzulazula
I-Bursa High Speed ​​Mobilization e-Ankara! 'IBursa Ifanelwe'
I-Ropeway ukugqugquzela ku-Trabzon
I-Asphalt Ukugqugquzela Emadolobheni
Ukuthuthukiswa Kwemigwaqo ye-Batmanda
Ukuthuthukiswa kwe-Asphalt kusuka eMetropolitan
Uzungöl neSümelaya Cable Car Campaign
Ukuxhuma kwenethiwekhi ye-Iron kwaqala emkhakheni wangasese
Ukugqugquzelwa kwamathambo eSiteshini seMetrobus
Umkhankaso Wokuthutha Womphakathi weRiphabhliki neRemocratic Rally ku-Izmir
Ukuthunyelwa ngaphandle kwe-İzmir Transportation
IZBAN Ukugqugquzela Ezokuthutha Zomphakathi
Imizila ye-Izmir trolley iyaqhubeka ihlanganisa
Umkhankaso Wokususa Isiqhwa Emasitimeleni
I-Balıkesir "Imikhosi Yokugqugquzela Ukuthumela Izinto"
Ukuthuthwa kwe-asphalt eDilovası
Ukuthuthukiswa kwe-Asphalt ku-Trabzon
Ukugqugquzela ukukhiqizwa kwezwe nokuzwelonke kusuka edolobheni laseBursa
Ukugqugquzelwa kwe-Asphalt eMamak Kuqhubeka Ukuqhuma Okugcwele